Fluoxymesterone (Halotestin) ntụ ntụ (76-43-7) ≥98% | Aṣraw PCT Drugs
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Fluoxymesterone (Halotestin) ntụ ntụ
SKU: 76-43-7. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Fluoxymesterone (Halotestin) (76-43-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
I. Fluoxymesterone (Halotestin) ntụ ntụ isi agwa:
aha: Fluoxymesterone (Halotestin) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C20H29FO3
Ọbara arọ: 336.44
II. Fluoxymesterone (Halotestin) ntụ ntụ
Fluoxymesterone ntụ ntụ (CAS 76-43-7) na-akpọ Halotestin ntụ ntụ ma ọ bụ Ultandren.
2. Fluoxymesterone ntụ ntụ Usage:
Fluoxymesterone (Halotestin) ntụ ntụ bụ maka ojiji obụrụ. N'ahịa, e nwere ntinye mbadamba ntinye nke 3: 2.5mg; 5mg; 10mg, Fluoxymesterone ntụ ntụ ga-agba ọsọ 10-40mg kwa ụbọchị, izu 2-4.
3. Ịdọ aka ná ntị na icha ntụ (CAS 76-43-7)
Ọ bụ ezie na ọ bụghị steroid na-ebibi ihe, mmetụta dị na Fluoxymesterone ntụ ntụ nwere ike ịgụnye:
ike mmeghachi omume androgenic ọjọọ. Ihe ndị na-akpata orrogenic gụnyere acne, na-eme ka ntutu isi na-eme ka ndị isi na-eto eto, na-eto eto nke nwanyi (nke dị n'akụkụ dị iche iche nke ntutu ahụ,
nyocha nke omimi na mmụba nke onye na-agba ume) na-ebuli elu mgbali elu, dị ka mmụba ma ọ bụ ibelata na LDL cholesterol, na-egbochi mmepụta nke testosterone
Ihe ọzọ bụ, Ọ bụrụ na ị jiri Fluoxymesterone ntụ ntụ, imeju ga-adị mma iji malite iji. Tụkwasị na nke ahụ, ndị mmadụ n'otu n'otu ga-agbalịsi ike belata ma belata nrụgide zuru oke n'ime imeju. Iji belata nrụgide, a gaghị eji ntụ ntụ Fluoxymesterone mee ihe maka ihe karịrị izu anọ
Mmetụta nke Fluoxymesterone ntụ ntụ na ike na-anọchite anya isi ihe steroid a. Enwere ole na ole ma ọ bụrụ na ndị steroid nwere ike ịkwalite ume dị ka Halo. N'ezie, ọ bụghị naanị na ọ ga-abụ ihe dị ịrịba ama na mmụba na-emekarị ngwa ngwa. Nke a apụtaghị na ị ga-enwezi 200lbs ugbu a karịa ka ị mere n'izu ole na ole gara aga, anyị enweghị ike ịkọ ọganihu dị elu site na otu onye gaa na-esote, mana ọ ga-adị ịrịba ama. N'ihi mmetụta nke Fluoxymesterone ntụ ntụ na ike, nke a na - eme ka ọ bụrụ steroid kachasị mma maka ndị na - eme egwuregwu ike, ọ bụghị ihe ijuanya n'ebe ahụ. Nke a bụ nnọọ steroid n'etiti ndị ike na-ewuli elu na ndị siri ike na ndị asọmpi. Ọ bụkwa ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị agha, ndị mgbampụ na onye ọ bụla ọzọ na-asọmpi nke nwere ike irite uru na ụdị yiri ya.
5. Fluoxymesterone ntụ ntụ:
7. Fluoxymesterone ntụ ntụ ahịa:
III. Fluoxymesterone (Halotestin) ntụ ntụ HNMR
Esi zụta Fluoxymesterone ntụ ntụ; zụta Halotestin ntụ ntụ (CAS 76-43-7) site na AASraw
AASraw na-enye 99% Fluoxymesterone ọcha / Halotestin raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ojiji oral.
Ntụziaka ntụziaka nke ntụ ntụ:
Fluoxymesterone / Halotestin raw ntụ ntụ Nkwupụta